Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရသေ့တောင်မြို့နယ် ကူတောင်ရွာမှာ ကံဆိုးကြရှာ
ရသေ့တောင်မြို့နယ် ကူတောင်ရွာမှာ ကံဆိုးကြရှာ
ရသေ့တောင်မြို့နယ်ရှိ ဂူတောင် ချေကျေးရွာသို့ ၀င်ရောက်မီးရှို့ခဲ့သည့် အနောက်ပြင်ကျေးရွာမှ ဘင်္ဂါလီ ၁၀၀ ခန့်အနက် ၂၂ ဦးအား လုံခြုံရေးအဖွဲ့များက ဖမ်း ဆီးရမိထားပြီးဖြစ်ပြီး ကျန်သူများ ကိုလည်း ဆက်လက်ဖမ်းဆီးလျက်ရှိကြောင်း ရသေ့တောင်မြို့ရောက်7Day သတင်းထောက်က ပေးပို့သည်။
ဖြစ်ပွားပုံမှာ ဇွန်လ ၁၉ ရက်က ဂူတောင်ချေကျေးရွာသို့ ဘင်္ဂါလီ ၁၀၀ ခန့်မှ အိမ်များကိုလာရောက်မီးရှို့ခဲ့သည့်အတွက် ဒေသခံရခိုင်လူမျိုးများမှ မီးရှိုသည့် အကြမ်းဖက်သမားများအားလိုက်လံဖမ်းဆီးရာ လယ်ကွင်းများအတွင်း ပုလင်းကွဲများ၊
တွင်းများတူးထားပြီး ထောင်ချောက်များ ဆင် ထားသည့်အတွက်
ရခိုင်လူမျိုးများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ဒဏ်ရာရရှိသူများကို ဘင်္ဂါလီကျေးရွာများအတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားကာ သတ်ပစ်ကြောင်း ယင်းဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သူ ဂူတောင်ချေကျေးရွာမှ ကိုဝင်းချေကပြောသည်။
ဖြစ်စဉ်တွင် ဘင်္ဂါလီများဘက်မှ တူးမီးသေနတ်များကိုပါ အသုံးပြုသည်ဟုသိရပြီး တူးမီးသေနတ် ဖြင့်
ပစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့် ဒဏ်ရာရသူများမှ ရသေ့တောင်ဆေးရုံတွင် ကုသမှုခံယူနေရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဇွန်လ ၂၀ ရက်တွင် မြို့နယ် သံဃာ့နာယကအဖွဲ့ဆရာတော် ၄၃ ပါး၊ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ တပ်မတော်သားများ၊ မြို့မိ၊ မြို့ဖများ ဂူတောင်မြောက်ကျောင်းတွင် စည်းဝေးခဲ့ကြပြီး အလောင်းများကို
ပြန်လည်တောင်းခံရာ ည ၁၀ နာရီခန့်တွင် အလောင်းသုံးလောင်းကို ဘင်္ဂါလီများက ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ညလုံးပေါက် တောင်းဆိုရာမှ စုစုပေါင်းအလောင်း ၁၀ လောင်းကို ရရှိခဲ့သည်။
လက်ရှိ ၁၀ လောင်းသာ ရရှိခဲ့သည့်အတွက် ယနေ့ သင်္ဂြိုဟ်ရန်စီစဉ်ထားသော်လည်း ကျန်သည့် ၁ လောင်းရမှ သင်္ဂြိုဟ်ရန် ဒေသခံများက ဆက်လက်တောင်းဆိုနေကြသည်။
ဘင်္ဂါလီများဘက်မှ ၂ ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် အဆိုပါ ပဋိပက္ခကြောင့် စုစုပေါင်း ၁၃ ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း ရသေ့တောင်မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းထောက်ပံ့ရေးနှင့် ကူညီရေးအဖွဲ့မှ ဦးသိန်းမောင်က
7Day News သို့ပြောသည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 05:11
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရသေ့တောင်မြို့နယ် ကူတောင်ရွာမှာ ကံဆိုးကြရှာ . All Rights Reserved